माधवमणि मणि नै हुन् ….२ - bampijhyala.com
Home > अनुभुती > माधवमणि मणि नै हुन् ….२
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २०:१३ bampijhyala
गत अङ्कको बाँकी अंश क्रमशः…
जीवन सरल रेखामा मात्र चल्दैन । नियमिले दीगो पनि गर्दो रहेछ । २०४२ सालमा निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको रजत जयञ्तीको विगबिगी थियो । केही बर्ष अगाडी माधवमणी राजभण्डारीको काका जगतनाथ राजभण्डारी कालिञ्चोक युवा क्लवका अध्यक्षले दोलखा दोलखा ट्राभल्स प्रा.लि. स्थापना गरेका थिए । राजा वीरेन्द्रले पहिले त मनाङ जिल्लाको वासिन्दाहरुलाई व्यवसाय गर्न हङकङ–काठमाण्डौं व्यापार गर्न राहदानी वितरणमा सहज बनाए । त्यस अघि पुलिस रिपोर्ट समेत चाहिन्थ्यौ । यसपछी काठमाण्डौं–हङकङ व्यापार चम्केपछी मनाङ्गेहरुमात्र होईन उनीहरुको भरिया बनेर अरु पनी जान थाले ।
फलतः शाही नेपाल वायु सेवा निगमको काठमाण्डौं हङकङ उडान चल्यो । स्वभावतः अरु ट्राभल्स एजेन्सीको त थाहा भएन दोलखा ट्राभल्सको चाही हङकङबाट फर्केर आएपछी टिकटको रकम पनी दिने गदथ्यौ । यसरी उधारो व्यवसाय गर्दा पनी कति सप्रीन्छ ? कति बिग्रिन्छ ? त्यसको लेखाजोखा दोलखा ट्राभल्सको व्यवस्थापन पक्षले गरेन । हुन सक्छ नयाँ ट्राभल्स एजेन्सी संग मिलेर निगमकै पदाधिकारीहरु पनी फाईदा उकासी एकाएक जगतनाथ राजभण्डारीले रु. १० लाखको घर विशाल नगरमा किने पछि चर्चित भयो ।
अन्नतः निगमले सावा व्याज गरी दोलखा ट्राभल्ससँग ७५ लाख लिनु पर्ने भनी फाईल विशेष प्रहरी विभागमा पठायो । कम्पनी प्रा.लि. भएकोले प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा माधवमणी राजभण्डारीको पनी नाम परेको थियो । सफाईको मौका समेत नदिई एकाएकको बदनियतमा फसिन पुग्नु भयो । ३ जनाको हुनाले भनेर भाग शान्ति सजाय भागी कहाँ पनी बन्नु पर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारियो जवकी उहाँ त्यसमा लेनदेन केही थिएन । काका जगतनाथ राजभण्डारीले गरी खाओस् भनी नामसम्म हाली सहमती दिनु भएको थियो ।
काका जगतनाथ राजभण्डारीले पनी क्षय रोगी विमार भई टोखा स्यानोटरेरिएम बसि औषधी गरी निको भई सकेको थियो । तर अचानकको यो काण्डमा परेर दश दिन हनुमान ढोकामा थुनिनु पर्दा पछी घर जमानतमा छोडी सकेपछि उपचारमा ढिलो भई भेङ्लोरमा अर्को काका कृष्णमणी राजभण्डारीले लादा पनी बचाउन सकिएन । माधवमणी राजभण्डारीलाई यो गल्पासो फुकाउन आफ्नै प्रयास र प्रयास चाहिन्थ्यौ ।
दोलखावासीबाट अभिनन्द गर्दाको क्षण श्रीमान श्रीमती माधवमणी राजभण्डारी
त्यै बेला राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले पंचायतको रजत जयन्ती बर्षको उपलक्ष्यमा “२५ बसन्त” नामक नेपाली चलचित्र निर्माण गरे । निगमले फाईल बन्द गर्ने कुरामा आश्वस्त पा¥यौ ।
सरकारले चाहेमा बृत्तचित्र सक्थ्यौ । तर सुवेदीलाई के लाग्यो भने सरकारले बनाए डकुमेन्ट्री हुन्छ । प्राईभेटले बनाए दोष आउँदैन २५ बसन्त बन्यौ । यसको निर्मातामा माधवमणी राजभण्डारीकै नाम रह्यो । तर जस्तो की मर्ने मदनदास मदन नै हुन । यसै गरी २५ बसन्तले पञ्चायतको २५ पैसा पनी फाईदा लिन सकेको छैन । केवल खलनायक बनेको कलाकार मदनदास श्रेष्ठ अभिनय शिल्प चम्केको छ ।
अर्को परिघटना पनि लेखिहालौं, २०४६ साल फागुन ७ देखि निर्दलिय व्यवस्था विरुद्धको जनक्रान्ती गर्ने उद्देश्यका साथ लौह पुरुष गणेशमान सिंहको निवासमा काँग्रेस र कम्युनिष्ट हुर्केको सम्मेलन भयो । जसमा भाग लिन भारतबाट पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर पनि नेपाल आई एभरेष्ट होटेलमा बस्नु भएको थियो ।
३० बर्ष निर्दलिय व्यवस्था केवल राजाको नामबाट टिकेको हुनाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई ह्याउ भएन न उनले चन्द्रशेखरलाई रोक्न सके, न चाक्सीवारी सम्मलेन । केवल कालो झण्डा देखाई विरोध प्रर्दशन गर्न पर्छ भन्नेमा मात्र लाग्यो ।
कालो झण्डाको प्रर्दशन गर्न पञ्चहरु संग गतिलो मानिस थिएन । उनीहरुले माधवमणी राजभण्डारीलाई समाते ।
देशको प्रधानमन्त्रीको अवज्ञा गरे के हुन्छ र ? हुन पनी माधवमणी राजभण्डार िपुग्दा भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरलाई नै स्वागत गरे । “आखिर यिनी लोगो ने आपकी हि भेजा है मुझे अच्छा लगा” कोइरालाकी अवसान पर एकली भ्यानमा हम दोनोही था । यसरी पञ्चायती कदमले अपनाएको बत्ता भुरुङ्ग भई फर्केर आफैतिर आउने भयो । अव अलि अगाडी छुटेको कुरा पनी सम्झु उहाँको फर्म नेकोएनकोले स्टीलको दराज उत्पादन गर्दथ्यौ ।
मण्डीखाटार स्थित निवासमा माधवमणी राजभण्डारी धर्मपत्नी सरला राजभण्डारीको साथमा
त्यतीखेर बिज्ञापन गर्ने साधन भनु या जे भने पनी रेडियो नेपाल मात्र थियो । बरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठज्यूले बरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य जस्ता कलाकारलाई चिनाए । पछी हरेक १५ दिनमा आधा घण्टाको रसरंग नेकोएनकोको प्रायोजनमा हुन थाल्यो । यो रसरंग सुन्न रेडियो नेपालको रेडियो प्रसारणमा झुम्मिन्थे । सडक सुनसान हुन्थ्यौ ।
माधवमणी राजभण्डारी गितकार पनी हुनु हुन्छ । वहाँको मिठास भावका प्रमिकाका गितहरु त्यतीबेला रेडियो नेपालले प्रसारण गरेको थियो । बि.सं. २०४६÷०४७ को जनआन्दोलन सफल भएपछी वहाँले खुल्ला रुपमा प्रजातन्त्र प्रतिको निष्ठावान कर्मशिल दर्शाउनु भयो ।
बि.सं. २०४७ साल जेष्ठ २६ गते दोलखा जिल्लाको सदरमुकाम चरिकोटमा बहुदलिय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आमसभा आयोजना गरिएको थियो । यसलाई सम्वोधन गर्न सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह जाने भनिएतापनी स्वास्थ्यको कारणले काँग्रेसको महामन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला जानु भयो । कालिञ्चोक युवा क्लवको अध्यक्ष स्वयम म आफै थिए । सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहलाई अभिनन्दपत्र दिने भनी निर्णय गरेर कार्यक्रममा समावेश गरिएकोमा अचानक परिवर्तन गर्ने सूचना राती १० बजे पाउँदा अहि गाह्रो महशुष भयो । किनकी सिंहज्युलाई चढाउने अभिनन्दन पत्र त तत्कालिन उपाध्यक्ष स्वर्गिय महेश कुमार श्रेष्ठको राम्रो लेखनबाट तयार पारिएको थियो । तर अव के गर्ने ? भोलीपल्ट विहानै बालुवाटारमा जम्मा भै पनी सूचना माधवमणी राजभण्डारीले खबर गर्नु भएको थियो । गाडी आङदोर्जेको थियो ।
मैले कालिञ्चोक युवा क्लवको लेटरप्याडमा गिरिजा बाबुको नाममा अभिनन्दन पत्र तयार गरे । हलहलेको चौरमा होटेल एम. एम. ईन्टरनेशनलबाट ल्याएका लञ्च प्याकेट खाएर फोटो पनी खिच्यौ । अन्नतः चरिकोट पुगेपछी त्यहाका कार्यकर्ताहरुले हाम्रो त पोष्टर पनी च्याती दियो भनी कुरा लगाएको झोकमा गिरिजाबाबुले “माले मसाले मण्डले एउटै हुन् । भर्खर पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रमा काँग्रेस र कम्प्युनिष्ट दुबैको बराबरी योगदान रहेकोले सहकार्य हुनु पर्छ भन्ने मान्यता बिपरीतको भाषण हुनाले वातावरण बिग्रन खोजी नारा जुलुस हुन थाल्यो । तर स्वर्गिय भीम बहादुर तमाङ, माधवमणी राजभण्डारी लगाएतका स्थानिय नेताहरुले बचाउनु भयो ।
पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा दोलखाका पुर्व अध्यक्ष जिवन लामा सहित दोलखाली पत्रकार माझ
२०५१ सालको मध्यावधी आम निर्वाचनमा प्रतिनिधी सभाको सदस्य हुन उम्मेदबार बन्न टिकट माधवमणी राजभण्डारीले पाउनु भयो । तर हुँदाखाँदाको प्रजातान्त्रिक अवधि छदाछर्दै गिरिजा बाबुले आकष्मिक संसद भंग गरेको दिनमा होला काँग्रेसले अपेक्षाकृत सफलता पाएनन् जसको मारमा माधवमणी राजभण्डारी पनी पर्नु भयो ।
नेपाली काँग्रेस दोलखा जिल्ला सभापती भएर २०४८ देखि २०५२ सालसम्म काम गर्नु भयो । स्वदेशमा व्यापार व्यवसाय र कलकत्तामा नेपाल ईन्टरनेशनल ईक्युमेन्ट सेन्टर नेपाली र विदेशीलाई पर्यटन सम्वन्धी सूचना लिने दिने काम गर्दथ्यौ । प्रा. डा. श्याम जोशी पन िउपचारको सिलसिलामा कलकत्ता जादा यही सेन्टरले व्यवस्था मिलाई दिएको थियो । नेपा एजेन्सी एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ठमेल मुख्य कार्यालय र शाखा कार्यालय कोलकताबाट सामानहरु आयात निर्यात गर्ने गदथ्यौ ।
आफ्नो स्वतन्त्र व्यवसायले जिविका आर्जन गरी त्यसभन्दा बढी राजनैतिक प्रलोभन वहाँले कहिले पनी गर्नु भएन, जसलाई जुन बेला चाहीन्छ सक्दो सहयोग गरि रहनु हुन्थ्यौ ।
२०६८ सालपछी वहाँ सामाजिक सेवामा पदिय दायित्व लिई काम गर्न द्वाल्खा गुठीको अध्यक्ष हुनु भयो । स्मरणिय छ कालिञ्चोक युवा क्लवमा ठिटाहरु र गुठीमा प्रौढहरु बस्ने अवधारणामा स्थापना भएकोमा पछिल्लो चरणमा दुवै संस्थामा बस्ने भए । गुठीले सामूहिक ब्रतबन्ध गर्ने द्वाल्खा क्षेत्र संघियतामा गएपछी यसको मौलिक अस्थित्व जोगाउने बारे सेमिनार, २०७० चैत्रमा हुरी आई प्रशिद्ध भीमेश्वरको चुडामणीको खम्बा डलेपछी गुठीका अध्यक्षको हैसियतले तुरुन्त कालिगढ गुभाजु झिकाई दोलखाको नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले ल्याउनु भएको खम्वा पुरानै ठाउँमा राख्न लगाउनु भयो ।
निवास मण्डीखाटारमा कुसले समाज दोलखाबाट आयोजित लाखेनाचमा
यसरी माधवणी राजभण्डारी अध्यक्ष हुँदा म महासचिव भएर काम गर्ने मौका पाएको थिए । यसै बिच दोलखामा भए गरेका साना ठुला कार्यमा वहाँ संग बसी सहयोग सेवा गर्ने अवसर पाए ।
यसै गरी दोलखा चरिकोटमा बिभेद कम गर्न दोलखामा दि राईजिङ्ग स्टार स्कुल खोल्नु भयो । पछी केही बर्ष पछी चरिकोट सार्नु भयो । यस स्कुलमा गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको लागि स्कुल फि मिनाह गरिदिनु भएको थियो । त्यसै गरी वहाँहरुको लागि केही प्रतिशत छुट्टयाउनुु भएको थियो । त्यूस्तै गरी वहाँले जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई उत्साह बढाउने हिसावले ईन्द्रमणी छात्रबृति नै स्थापना गर्नु भएको थियो । यसरी वहाँ गुठीमा अध्यक्ष भएर बस्नु हुँदा दोलखा काठमाण्डौलाई कार्य क्षेत्र बनाएर धेरै कामहरु गर्नु भएको छ ।
हाल मण्डीकाटार स्थित सरला छेँ मा परिवारको निगरानीमा रही रहनु भएको वहाँलाई नेपाली काँग्रेसले जेष्ठ नागरिक समन्वय समितीका सदस्य पनी दिई सक्नु भएको छ । यसै गरी जिवनको अस्थित्व कस्ले के भन्न सक्छ र ? गत पुष ४ गते माता टंककुमारी राजण्डारीको ९० बर्षको उमेरमा निधन भएपछी ईन्द्रमणीको पारिवारीक दायित्वको मुली माधवमणी राजभण्डारी नै हुनु भएको छ ।
बिष्णुकुमारीका पुत्र माधव र नारायण कै अर्को नाम हो । वहाँ यही सत्मार्गमा गतिशिल हुनु हुन्छ ।
दोलखा भीमेश्वरले वहाँलाई सु–स्वास्थ्य र दिर्घायु गरिरहुन भन्ने प्रार्थनामा दोलखावासीले नागरिक अभिनन्दन गरेका छन् ।
दोलखामा आज थप ७८ जना संक्रमण पुष्टी, अहिलेसम्म जम्मा संक्रमीतको संख्या ५८१, निको हुनेको संख्या ५५ जना, ७ जनाको मृत्यु र २ वडा शिल
आज दोलखामा थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २०:१३
‘सम्झिनी पानी छम्किनी’ भिडियोमा दीपा र भुवनको रोमान्स ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २०:१३
लघुकथा–पढ्ने रहर ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २०:१३
पछिल्लो चरणमा कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले सचेत रहन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाको अपिल ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २०:१३
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार २०:१३